.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှတဲ့ White Honest Template
ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှတဲ့ White Honest Template
ဒီ Template လေးကိုတော့ အဖြူရောင် ရိုးရိုးလေးနဲ့ပဲ လုပ်ထားတာပါ။ ကဗျာ ၊ ဝတ္ထု ၊ နည်းပညာ စတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ
တင်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းကတော့ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ သေသပ်အောင်
သေချာလေး လုပ်ထားတာပါ။ CSS Menu လေးရော ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ နမူနာ ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာပါ။
Download: White Honest Template
မှတ်ချက်။ ဒီ Template လေးကို ပြန်ရှယ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် Thurainlin ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာကို ထည့်ရေးပေးပါ။
Posted by Thurainlin at 08:46
Labels: Blog, Coding, CSS Menu, Template